Usapho lweeTattoo ezi-4, iimbono ezimbalwa zokuphefumlelwa Ukuzoba
Usapho lweeTattoos ezi-4, zimbono ezimbalwa zokuphefumlelwa
Iitattoos familia of 4 ezizodwa kakhulu, kuba zijolise kwezo intsapho namalungu amane ufuna ukubonisa indlela abamanyene ngayo kuyilo.
Apha ngezantsi kwe-tSinika iimbono ezimbalwa ukukhuthaza kwaye ufumane uyilo lwakho olufanelekileyo. Funda ukuze ufumane!
1 Izinto ezine ezincedisayo
2 Amachaphaza amancinci kuwo wonke umntu
3 Uluhlu oluphezulu lubalulekile
Izinto ezine ezincedisayo
Ukhetho lwantlandlolo kukukhetha umvambo omele izinto, zona ezo zenziwe ngamacandelo amane. Umzekelo, iisuti zomgangatho, ii-clover ezinamagqabi amane, izinto ezisisiseko (amanzi, umhlaba, umlilo kunye nomoya) ... Unokukhetha ukwenza i-tattoo kuphela yinxalenye yezi zinto (ukuze ziphelele xa zidibene) okanye uzenzele umvambo into nganye nganye
Amachaphaza amancinci kuwo wonke umntu
Olunye uluvo losapho lweeTattoos 4 kukukhetha amachaphaza amancinci. Umzekelo, unokwenza i-tattoo ngamanqaku amane ukuze nganye inendawo yayo kusapho oluphawulwe. Olunye ukhetho lubandakanya inqaku ngalinye elinombala owuthandayo, umzekelo. Kwaye ukuba awonwabanga nje ngamanqaku, jonga inani lejiyometri elinobuso obune, nayo intle kakhulu!
Uluhlu oluphezulu lubalulekile
Okokugqibela, kwiintsapho ezininzi zemveli, mhlawumbi ukhetho olufanelekileyo kukwenza izinto zicace ngazo itattoo ekubhalela ngokwendima yakho kusapho: utata, umama, unyana 1 nonyana 2, umzekelo. Nangona kukho iintlobo ezingapheliyo esinokufumana kuzo umvambo okhethekileyo ngakumbi, umzekelo, ukwenza umvambo kusapho lwakho.
Ezi tatto nazo Zikulungele ukuhamba nezinye izinto, ezinje ngemihla, amagama afanelekileyo kunye neempawu ezincinci ezichaza nganye nganye. Umzekelo, ukuba umama wakho uyathanda umdlalo wamanqindi (okanye akubetha ngempama esikushiya uqine) angazenza iigloves ecaleni kwegama lakhe, kwaye afane namanye amalungu osapho.
Siyathemba ukuba olu sapho lwee-4 tattoos zikunike imibono elungileyo yoyilo lwakho lwexesha elizayo. Khawusixelele, unazo iitatoo ezinje? Sazise kumagqabantshintshi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitatto ezinemilo » Usapho lweeTattoos ezi-4, zimbono ezimbalwa zokuphefumlelwa
I-Serendipity tattoo, fumana yonke into ngeli gama linomdla
IiTattoos kumanqaku olula, sisombulula onke amathandabuzo akho